Duulankii Oromadda oo wali kusii Sinqi Dhulka Soomaalida Ethiopia iyo Maamulka Jigjigga oo Hadal iyo Hugun midna laga hayn. – Xeernews24
Duulankii Oromadda oo wali kusii Sinqi Dhulka Soomaalida Ethiopia iyo Maamulka Jigjigga oo Hadal iyo Hugun midna laga hayn.
Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Ismaamulka gobolka Oromada ayaa muran xoog leh uu ka taagan yahay soohdin dhuleedka labadaasi gobol u dhaxeeya, iyadoo xaalad kacsanaan ah ay ka jirto deegaankaasi.
Ku dhawaad 35,000 ruux ayaa ku barakacday muran xuduudeedkaasi , iyadoo ismaamulka Oromada uu ku soo siqayo Gobolka Soomaalida, xilli tuulooyin badan oo Soomaali leedahay ay xoog ku deegaansadeen Qowmiyadaha Afar iyo Oromo iyagoo naas-nuujin ka haysta maamulka Tigreega.
Qowmiyadda Oromada ayaa dhul boob baahsan ku heysa Dhulka Soomaalida ee hore loogu yiqiinay magaca “Soomaali galbeed” , waxaana laga cabsi qabaa in qalalaase dhiig ku daato uu halkaasi ka holco.
Arrintan ayaa waxa ay imaaneysaa xilli dadka Soomaaliyeed ee Gobolka Soomaalida Itoobiya ay la dac dareysan yihiin abaar daran iyo cudurka kalooraha oo dad badan soo ritay, sidoo kalana nolosha dhaafiyay dad u badan da’, caruur iyo haween.
Colaada ka soo cusboonaatay Soohdinta u dhaxeysa Gobolka Soomaalida iyo Oromada ayaa ku soo beegmay xilli Itoobiya ay wajaheyso xaalado adag oo qalalaase ah.
Dowladda Feederaalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay dabcisay bandowgii ay ku rogtay qeybo ka mid ah dalkaasi oo banaanbaxyo rabshado wata ay abaabulayeen Qowmiyadaha Amhara iyo Oromo tan iyo sanadkii hore 2016 .
Warka ayaa waxa uu sheegayaa in March 11, buur qashin oo is dul fuullay ay ku dul rogmatay guryo ku yaalla duleedka Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Itoobiya, waxaana ku geeriyooday in ka badan 82 ruux, waxaana ku burburay ugu yaraan illaa 49 Aqal.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/oromiaregion-300x190.gif 190 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-17 00:08:592017-03-17 00:20:26Duulankii Oromadda oo wali kusii Sinqi Dhulka Soomaalida Ethiopia iyo Maamulka Jigjigga oo Hadal iyo Hugun midna laga hayn.
R/Wasaaraha Holland oo Cashir u dhigay Cunsurigii la celin waayay iyo Niyad... Markabkii Budhcad Badeedu Ku Haysatey Xeebaha Soomaaliya Oo Xeeladaysan loo...